GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Albanian Sign Language American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language Flemish Sign Language French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Melanesian Sign Language Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Myanmar Sign Language Navajo Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Punjabi (Roman) Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Romanian Sign Language Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkish Sign Language Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Vietnamese Sign Language Waray-Waray Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Ndị nchụàjà akụzirighị ndị mmadụ ihe (1-9)
Egbugbere ọnụ ndị nchụàjà kwesịrị ịkụziri ndị mmadụ gbasara Chineke (7)
Ndị mmadụ na-agba alụkwaghịm na-ekwesịghị ekwesị (10-17)
‘“M kpọrọ ịgba alụkwaghịm asị.” Ọ bụ ihe Jehova kwuru’ (16)
2 “Ndị nchụàjà, ọ bụ unu ka m na-enye iwu a.+ 2 Ọ bụrụ na unu egeghị ntị, ọ bụrụkwa na e nweghị ihe unu ji ito aha m kpọrọ,* m ga-abụ unu ọnụ,+ m ga-emekwa ka ngọzi unu bụrụ ịbụ ọnụ.+ N’eziokwu, emeela m ka ngọzi unu bụrụ ịbụ ọnụ n’ihi na e nweghị ihe unu ji ya kpọrọ.” Ọ bụ ihe Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru. 3 “Lee, m ga-emebi mkpụrụ unu kụrụ akụ* n’ihi unu,+ m ga-efekwa unu nsị n’ihu, nsị anụmanụ unu ji chụọ àjà n’oge ememme unu. A ga-eburukwa unu tụba na ya.* 4 Unu ga-amatazi na m nyere unu iwu a ka ọgbụgba ndụ mụ na Livaị wee dịgide.”+ Ọ bụ ihe Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru. 5 “Ọgbụgba ndụ mụ na ya bụ nke ndụ na nke udo, nke m nyere ya, ka o wee tụọ egwu m.* Ọ tụrụ egwu m. N’eziokwu, ọ tụrụ egwu aha m. 6 Iwu* nke eziokwu dị n’ọnụ ya,+ e nweghịkwa okwu ọjọọ a hụrụ n’egbugbere ọnụ ya. Mụ na ya dị n’udo. Ọ kwụwara aka ya ọtọ,+ meekwa ka ọtụtụ ndị hapụ mmehie ha. 7 N’ihi na egbugbere ọnụ onye nchụàjà kwesịrị ịna-akụziri ndị mmadụ gbasara Chineke, ndị mmadụ kwesịkwara ịna-ajụta ya ihe iwu kwuru*+ maka na ọ bụ onye ozi Jehova nke ụsụụ ndị agha. 8 Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru, sị, “Ma unu ahapụla ụzọ ahụ. Unu emeela ka ọtụtụ ndị ghara ịna-edebe iwu.*+ Unu emebiela ọgbụgba ndụ Livaị.+ 9 N’ihi ya, m ga-eme ka ndị niile kpọọ unu asị ma leda unu anya n’ihi na unu esoghị ụzọ m, kama unu na-ele mmadụ anya n’ihu ma unu mewe ihe iwu kwuru.”+ 10 “Ọ́ bụghị otu nna ka anyị niile nwere?+ Ọ́ bụghị otu Chineke kere anyị? Gịnịzi mere anyị ji na-aghọ ibe anyị aghụghọ,+ na-emebi ọgbụgba ndụ ndị nna nna anyị? 11 Juda aghọọla aghụghọ, e meekwala arụ n’Izrel nakwa na Jeruselem; n’ihi na Juda asọpụrụghị* Jehova+ onye hụrụ ihe dị nsọ n’anya. Juda lụkwara nwaanyị na-efe chi ndị mba ọzọ.*+ 12 Jehova ga-ebibi onye ọ bụla na-eme ihe a n’ụlọikwuu Jekọb, onye ọ sọkwara ya bụrụ,* n’agbanyeghị na ọ na-ewetara Jehova nke ụsụụ ndị agha onyinye.”+ 13 “E nwekwara ihe ọzọ* unu na-eme nke mere ka anya mmiri, ibe ákwá, na ịsụ ude kpuchie ebe ịchụàjà Jehova, nke mere na ọ naghịzi anabata onyinye unu, ihe ọ bụla unu wetara anaghịkwa amasị ya.+ 14 Unu na-asịkwa, ‘Ọ̀ bụ n’ihi gịnị?’ Ọ bụ n’ihi na Jehova agbaala akaebe na ị ghọrọ nwunye ị lụrụ n’okorobịa aghụghọ, n’agbanyeghị na ọ bụ nwunye gị, bụrụkwa nwaanyị gị na ya gbara ndụ.+ 15 Ma, e nwere onye na-emeghị otú ahụ n’ihi na mmụọ nsọ ka dị n’ime ya. Gịnịkwa ka onye ahụ na-achọ? Ọ na-achọ ụmụ* ga-abụ nke Chineke. N’ihi ya, kpacharanụ anya gbasara ihe unu na-eche n’obi unu,* ka onye ọ bụla ghara ịghọ nwunye ọ lụrụ n’okorobịa aghụghọ. 16 N’ihi na m kpọrọ* ịgba alụkwaghịm asị.”+ Ọ bụ ihe Jehova bụ́ Chineke Izrel kwuru. “M kpọkwara onye na-arụ arụrụala* asị. Kpacharanụ anya gbasara ihe unu na-eche n’obi unu,* unu aghọkwala aghụghọ.”+ Ọ bụ ihe Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru. 17 “Ihe unu na-ekwu emeela ka ike unu gwụ Jehova.+ Ma, unu na-asị, ‘Olee otú anyị si mee ka ike anyị gwụ ya?’ Ọ bụ maka na unu na-asị, ‘Onye ọ bụla na-eme ihe ọjọọ dị mma n’anya Jehova, ihe onye ahụ na-amasịkwa ya,’+ ma ọ bụ na-asị, ‘Ebee ka Chineke onye na-ekpe ikpe ziri ezi nọ?’”
^ Ma ọ bụ “ọ dịghị unu n’obi ito aha m.”
^ Na Hibru, “ga-abara mkpụrụ unu kụrụ akụ mba.”
^ Ya bụ, n’ebe a na-ekposa nsị anụmanụ ndị e ji achụ àjà.
^ Ma ọ bụ “sọpụrụ m; kwanyere m ùgwù.”
^ Ma ọ bụ “ịna-ajụta ya ntụziaka.”
^ O nwere ike ịbụ, “Ntụziaka unu emeela ka ọtụtụ ndị mehie.”
^ O nwere ike ịbụ, “emerụọla ụlọ nsọ.”
^ Na Hibru, “ada chi ndị mba ọzọ.”
^ Na Hibru, “onye mụ anya na onye na-azaghachi.”
^ Na Hibru, “ihe nke abụọ.”
^ Na Hibru, “gbasara mmụọ unu.”
^ Na Hibru, “ọ kpọrọ.”
^ Na Hibru, “onye ji arụrụala kpuchie uwe ya.”